Kunzwisisa Kubhadhara Kwako Pari Kubaya Kunobatsira Yako Organic Kutsvaga Martech Zone
Yakaiswa mukati mako mazuva ese nekushambadzira gurus ... haufanire kubhadhara mari yekudzvanya. Iva wepakutanga, nyora zvirimo, govana pasocial media - uye mashiripiti kutengesa kwacho kunouya kuchirovera pasi musuwo wako. Kana ivo vachadaro? Ini ndinoramba ndichiparidzira kune vateereri vedu kuti haina kumbobvira iri svikiro pamusoro peimwe, ndiyo nzira yavanogona kufudza kana kuteedzana. Kana iri Tsvaga Engine Optimization ne Tsvaga Injini yekutengesa uye Bhadhara Per Click, pane imwe inoshamisa synergy mukushandisa zvese zviri zviviri.
Yedu podcast inotevera pa Kumucheto kweWebhu Radio tichakurukura uyu wenyaya wenyaya pamwe nezvimwe zvikonzero kambani yako inofanirwa kuisa mari muPay Per Click.
Kuchinja Keywords - Kana iwe uri kutanga pasi nemugwagwa wekunyora zvemukati kuti uwane chinzvimbo, chii chauri kunyora nezvazvo? Ndeapi akanakisa mazwi ayo achashandura traffic yakawanda? Makambani akawandisa haana zano… vanoita tsvakiridzo pane yavo indasitiri uye vakwikwidzi uye vanouya nerondedzero. Zvino kwemwedzi vanoshandisa matani ezve zviwanikwa kuti vawane chinzvimbo pane aya mazwi. Pamwe vanoverengerwa… kungoziva kuti hapana munhu ari kushandura pane yavo saiti chero zvakadaro. Panzvimbo pekudyara iyo nguva uye simba mune zvemukati uye zvekutsvaga kwekutsvaga, vangadai vakatora kamari kadiki pakubhadhara nekudzvanya uye kunyatso kuyedza musanganiswa wezwi rakakosha kuti vaone chakashandura chakanakisa. Paunenge iwe uchinge waziva izvo zvinoshanduka, ipapo unogona kunyora, kugovana, uye kukurudzira zvirimo pamusoro wenyaya kuti uvandudze yako yekutsvaga chinzvimbo uye kudzikisira yako yakazara mutengo pamutungamiri.
SERP Real Estate - Wakambotsvaga here hombe chigadzirwa kana brand uye wakashamisika kuona kuti ivo vakabhadhara kushambadza pane yavo chigadzirwa kana zita rezita? Pane zvikonzero zvinoitisa izvi… chekutanga ndechekuti vakwikwidzi vavo vasahwina pamhedzisiro iyi. Asi chikonzero chinonyanya kumanikidza ndechekuti iwe unogona kuwedzera zvakanyanya yako yekudzvanya-kuburikidza nemutero pane Yekutsvaga Injini Mhedzisiro Peji (SERP) kunyangwe iwe uchinge wakamira munzvimbo dzakakwirira kwazvo! Paunenge uchitara pekutanga, unogona kuwedzera kubaya kuburikidza nemutero (CTR) ne50%, kushambadzira kwePPC padhuze nematanho kubva pa2 kusvika ku4 kunogona kuwedzera CTR ne82%, uye pamatanho ari pasi pe5 iyo CTR ichawedzera 96% paavhareji !
Kubva Kutsvaga Injini Nyika - Google Tsvagiridzo: Kunyangwe Iine # 1 Organic Chinzvimbo, Kubhadharwa Ads Inopa 50% Kuwedzera Kuwedzeredza:
Kutendeuka Mitengo - Mushure mekunge mushandisi abaya paSERP uye asvika pane yako saiti, iwe unogona kuwana kuti, kunze kwekutungamira chaiko, yakabhadharwa yekutsvaga traffic ine yakanyanya kukosha uye nemitengo mikuru yekutendeuka. Izvo zvakakosha zvakakosha uye iwe unofanirwa kuseta analytics nemazvo uye uteedzere yega yemishandirapamwe yako zvakanyatso. Dzidziso iri shure kweiyi yakapusa - kana vashandisi veinjini yekutsvaga vakagadzirira kushandura, vanosvetukira paSERP uye tinya pamhedzisiro yepamusoro.
Kutangazve - Imwe bhenefiti hombe iyo PPC ine pamusoro peako SEO zano ndiyo mukana wekumakisazve. Kumisazve kunanga kushambadzira kune vanhu vakatoshanyira yako saiti (asi vasina kutenga) kuburikidza nekutumira mameseji kana zvipo zvega. NeGoogle Adwords, semuenzaniso, unogona kugadzira mishandirapamwe kutsvagisa uye kunyangwe yechitatu mapato saiti ayo acharatidza kushambadza kwako mushure mekunge mushanyi asvika panzvimbo yako uye abva Ndiri kutya kuti haugone kutevera mumwe munhu akadaro nekutsvaga kwehupenyu saka zvinobatsira zvakanyanya.
Usadzinga yakabhadharwa yekutsvaga. Sezvo zvemukati marongero akakwira mukuzivikanwa, makwikwi anotyisa - achida mabhajeti ekusimudzira kuti aite mutsauko. Ini ndinokukurudzira iwe kuti utsvage nyanzvi (zvikasadaro bhajeti yako ichadyiwa pamwero unopfuura kunzwisisa!). Edza matani emubatanidzwa, shandisa zvakanakisa maitiro, dzinga iwo ekushandura mazwi akakosha nema organic maekisheni ekudzikisa mutengo pamutobvu, uye shandura ruzhinji kuenda kukambani yako. Bhadhara pakadzvanya ishamwari yekutsvaga yekutsvaga
Tags: conversion ratekushandura mazwi akakoshakumucheto kwewebhu redhiyokutendeuka kwemazwiorganicorganic searchkubhadhara pakukandappckudzokororainjini yekutsvaga nyikanyokaserp ctrserp real estate
Odha Tsika Dzinonamira mu 2 Maminitsi ne Sticker Mule